IGlucometer "Accu Chek Performa" (Accu Chek Performa): izinzuzo nobubi > Ukuxilonga
Ukubuyekezwa kweMeter ye-Accu-Chek Performa Nano Glucose
Ukuze ulondoloze impilo futhi uvikele izinkinga, abanesifo sikashukela kudingeka bahlole njalo amazinga kashukela egazini. Ungakwenza lokhu ekhaya usebenzisa ithuluzi elikhethekile. Elinye lamadivayisi anamuhla i-Accu-Chek Performa glucometer (i-Accu Chek Performa).
Idivayisi yenkampani yaseJalimane iRoche ihlanganisa ukunemba, usayizi we-compact, ukwakheka okumnandi nokusebenziseka kalula. I-Accu Chek Perform glucometer isetshenziswa iziguli, ochwepheshe ezikhungweni zezokwelapha nodokotela abaphuthumayo.
isisindo - 59 g
ubukhulu - 94 × 52 × 21 mm,
inani lemiphumela elondoloziwe - 500,
isikhathi sokulinda - imizuzwana emi-5,
umthamo wegazi wokuhlaziywa - 0,6 μl,
Ibhethri le-lithium: thayipha i-CR 2032, yenzelwe izilinganiso ezingama-2000,
ukufaka amakhodi kuyazenzakalela.
Igazi le-capillary lithathwa ukuze lihlaziywe. Indlela ekhethekile ye-Accu Chek Softclix ikuvumela ukuthi ulawule ukujula kwesikhonkwane. Isampula yegazi ishesha futhi ayinabuhlungu ngokuphelele. Kunikezwa isixazululo sokulawula samazinga e-2: ushukela ophansi futhi ophakeme. Kuyadingeka ukuqinisekisa ukusebenza kahle kwemitha noma ukunquma ukunemba kwezinkomba. Ukuhlolwa kufanele kwenziwe ngemuva kokufaka ibhethri esikhundleni sokutholwa komphumela ongathandeki noma lapho kusetshenziswa ukufakwa okusha kwemichilo yokuhlola.
Isibonisi esikhulu. Imitha ifakwe isibonisi esikhulu esibonisa umehluko omkhulu ngamanani amakhulu. Umphumela ubonakala kahle ngisho nasezigulini ezinokukhubazeka okubukwayo. Umzimba wenziwe ngepulasitiki enamandla. Ingaphezulu liminyene. Ukuphathwa kwenziwa kusetshenziswa izinkinobho ezinkulu ezi-2 ezitholakala kuphaneli enkulu.
Ukubumbana. Ngaphandle kufana ne-keychain kusuka ku-alamu. Kulula ukulingana esikhwameni, ephaketheni noma esikhwameni sezingane.
Amandla okuzenzakalelayo acishiwe. Idivayisi iyeka ukusebenza imizuzu engu-2 ngemuva kokuhlaziywa. Usebenzisa imbobo engenantambo ye-infrared, imininingwane yemitha ingavumelaniswa ne-PC. Ungagcina umkhondo we-average of 1, 2 no 4 weeks.
Izici ezingeziwe. Idivayisi ifakwe eminye imisebenzi eyengeziwe, isibonelo, isikhumbuzi ngesidingo sokwenza uhlaziyo. Setha ezikhundleni zokuqwashisa ezi-4. I-alamu ikhala izikhathi ezi-3 njalo ngemizuzu emi-2. Futhi kuzilungiselelo ungabeka izinga elibucayi le-glucose egazini. Ngenxa yalokhu, i-glucometer ixwayisa nge-hypoglycemia engenzeka.
Ihlome ngokuphelele. Insimbi, insimbi yokubhoboza kanye namazolo kufakiwe kwiphakheji ejwayelekile. Icala lokulondolozwa nalo lifakiwe.
Umehluko phakathi kwe-Accu Chek Performa neNano Performa
URoche wethule umugqa we-Accu-Chek wama-glucometer (Accu Chek). Kubandakanya amadivayisi ayi-6, athuthukiswe ngesisekelo semigomo yokusebenza ehlukile. Imvamisa, amadivaysi alinganisa amazinga kashukela ngokuhlaziywa kwe-photometric kombala womucu wokuhlola ngemuva kokungenisa igazi kuwo.
Imodeli ngayinye ihlukaniswa ngezimpawu zayo nemisebenzi ethile. Ngenxa yalokhu, umuntu onesifo sikashukela angakhetha idivaysi efanelekile kakhulu.
I-Accu Chek Perform Nano glucometer iyi-analogue yesimanje yemodeli ye-Accu Chek Perform.
Izimpawu ezibalulekile zokuqhathanisa Ishadi
I-Accu-Chek Performa Nano
Isisindo 59 g 40 g
Ubukhulu 94 × 52 × 21 mm 43 × 69 × 20 mm
Ukufaka amakhodi Shintsha ipuleti I-chip ayishintshi
I-Performa Nano yenza ukuhlolwa kwegazi okubanzi kusetshenziswa indlela ye-electrochemical biosensor. Inomklamo wesimanje, okulula nokucinana. Usebenzisa le divayisi, ungathola ukubalwa kwamazinga aphakeme kashukela egazini, kanye nemininingwane yokuthola ushukela ngaphambi nangemva kokudla. Imodeli inqanyuliwe. Kepha isengathengwa kwezinye izitolo eziku-inthanethi noma emakhemisi.
Womabili amamodeli ashesha kakhulu. Isikhathi sokulinda somphumela yimizuzwana emi-5. Kudingeka kuphela i-0.6 μl yegazi ukuhlaziywa. Lokhu kukuvumela ukuthi wenze ukubhoboza izinhlungu okungaxineki.
Ikhithi elinemitha ifaka imiyalo. Ngaphambi kokusebenzisa insiza okokuqala, qiniseka ukuyifunda.
Idivayisi idinga imicu yokuhlola yoqobo. Banempilo ende eshalofini, bakwazi ukuzivumelanisa nezimo zokushisa kanye nomswakama. Imichilo yokuhlola idonsa inani eliphansi legazi elidingekayo ekuhlolweni. Kuyatholakala ekupakweni ngekhodi lekhodi. Ngaphambi kokuvula imitha okokuqala, faka ipuleti nenombolo kusixhumi. Izenzo ezifanayo kumele zenziwe ngaphambi kokusebenzisa imichilo yepakethe ngalinye elisha. Ngaphambi kwalapho, susa ipuleti lakudala.
Lungiselela idivayisi yokubhoboza. Ngemuva kokuhlaziywa, inaliti elahliwayo izodingeka isuswe futhi ilahlwe. Faka umucu wokuhlola ku-slot ozinikele. Ikhodi kufanele ivele esikrinini. Qhathanisa nenombolo ekusekelweni kwengozi. Uma kungafani, phinda isenzo futhi.
Geza izandla zakho ngensipho bese womile. Phatha umunwe wakho ngekhambi le-antiseptic.
Yenza ukubethelwa okungaxutshwe ne-Accu Check Softclix.
Beka ithonsi legazi emgqeni wokuhlola - indawo imakwe ngphuzi.
Hlola umphumela. Ngemuva kwemizuzwana emi-5, umphumela uvela esikrinini semitha. Uma izinga likashukela wegazi lidlula inani elivumelekile, uzokuzwa isiginali yesexwayiso. Lapho ukuhlaziya sekuqediwe, khipha umucu wokuhlola kusuka kudivayisi bese ulahla.
Idivayisi ikalwa nge-plasma. Ngakho-ke, igazi lokuhlaziywa lingathathwa kwezinye izindawo - intende yesandla noma ingalo. Kodwa-ke, umphumela ngeke uhlale ulungile. Kulokhu, ukuhlaziywa kufanele kwenziwe esiswini esingenalutho.
I-Accu Chek Yenza kahle i-glucometer futhi ngokushesha inquma izinga likashukela egazini. Idivayisi ihlukaniswa ngomklamo omnandi, icala elinamandla nesikrini esikhulu. Idivaysi kulula ukuyisebenzisa. Inkampani inikeza isiqinisekiso sekhwalithi.
Idivaysi yesimanje, ehlanganisa ukusetshenziswa kalula nokuthenjwa kwemiphumela, yi-Accu-Chek Performa Nano glucometer. Lincane ngosayizi futhi lihlukile ngokuqanjwa kwalo kwesimanje phakathi kwamanye amadivayisi wesenzo esifanayo. Idivayisi kufanelekile ukuyisebenzisa, ngoba ekunqumeni ushukela emzimbeni ayidingi amakhono akhethekile esigulini.
I-Accu-Chek Performa Nano isetshenziswa kabanzi ezikhungweni zezokwelapha ukulawula amazinga e-glucose kubantu abanesifo sikashukela. Idivayisi ingathengwa ekhemisi futhi isetshenziswe ekhaya ukuhlola isimo sesiguli.
Idivayisi ngokwayo incane ngosayizi, kepha isibonisi sayo sikhulu futhi siphakeme kakhulu. Imitha kulula ukuyilingana noma esikhwameni sakho noma ephaketheni lakho lezingubo. Kungenzeka ukufunda imiphumela yocwaningo ngenxa yesibani esikhanyayo sombukiso.
Amapharamitha obuchwepheshe wemitha asiza abantu asebekhulile ukuyisebenzisa, ngoba imininingwane yocwaningo iboniswa ngamanani amakhulu.
Kungenzeka ukulawula ukujula kokubhoboza esibayeni esibalulekile esifakiwe nemitha. Ngenxa yalolu khetho, kungenzeka ukuthola igazi lokucwaninga ngesikhathi esifushane ngaphandle kokubangela imizwa engakhululeki ngesikhathi senqubo.
I-Accu-Chek Performa Nano kulula ukuyisebenzisa, futhi kungenzeka ukuthola imiphumela yocwaningo ngaphandle kwemizamo ekhethekile. Idivayisi ivula futhi icime kumodi ezenzakalelayo, futhi igazi lokucwaninga lungatholakala ngendlela ye-capillary. Ukuhlola okuqukethwe kweglucose egazini, udinga ukufaka umucu wokuhlola ocingweni, uphonsa igazi elincanyana kuwo bese kuthi ngemuva kwemizuzwana emi-4, uwubone umphumela.
Ubukhulu bemitha ye-Accu-Chek Performa Nano ngu-43 * 69 * 20, futhi isisindo asidluli ngama-40 amagremu. Isici sedivaysi yikhono lokugcina kwimemori inani elikhulu lemiphumela elibonisa usuku nesikhathi senkambiso leyo.
Ngaphezu kwalokho, imitha inikezwe umsebenzi ofana nokuthola isilinganiso esimaphakathi sezinsuku eziyi-7, izinyanga ezi-2 noma ezi-3. Ngosizo lomsebenzi onjalo, kungenzeka ukuthi ubheke ukuguquguquka kwezinguquko ekugxilweni kwe-glucose egazini lomuntu futhi kuhlolwe izinkomba isikhathi eside.
I-Accu-Chek Perform Nano ine-port infrared, eyenza sikwazi ukuvumelanisa yonke idatha etholakele nge-laptop noma ikhompyutha.
Umsebenzi wokukhumbuza ufakiwe kudivayisi, esiza umuntu onesifo sikashukela ukuthi angakhohlwa ngesidingo sokwenza inqubo.
U-Accu-Chek Perfoma Nano angakwazi ukuvula noma ukucima isikhashana ngemuva kocwaningo. Ngemuva kokuphelelwa isikhathi kokugcinwa kwemichilo yokuhlola - idivaysi ivame ukubika lokhu nge-alamu.
Ukubuyekezwa mayelana nedivayisi i-Accu-Chek Performa Nano kukhona okuhle kakhulu. Iziguli eziningi ziqinisekisa ukuthi kulula kwayo ekwelashweni, ikhwalithi kanye nokusebenza okuningi. Abantu abanesifo sikashukela baphawula izinzuzo ezilandelayo ze-glucometer:
ukusetshenziswa kwensiza kusiza ukuthola imininingwane mayelana nokuxhuma ushukela emzimbeni ngemuva kwemizuzwana embalwa,
ama-millilitha ambalwa wegazi anele inqubo,
indlela ye-electrochemical isetshenziselwa ukuhlola ushukela
idivaysi ine-port emnyama, ngenxa yokuthi ungavumelanisa idatha nemidiya yangaphandle,
ukufaka amakhodi we-glucometer kwenziwa ngemodi yokuzenzakalelayo,
imemori yedivayisi ikuvumela ukuthi ulondoloze imiphumela yezilinganiso ngosuku nesikhathi sokufunda,
imitha incane kakhulu, ngakho-ke kulula ukuyithwala ephaketheni lakho,
Amabhethri anikezwe ngethuluzi avumela ukukala okungafika ku-2 000.
I-Accu-Chek Performa Nano glucometer inezinzuzo eziningi, kepha ezinye iziguli zibuye ziveze ukusilela. Intengo yedivayisi iphakeme kakhulu futhi kuvame ukuba nzima ukuthenga izinto ezifanele.
Ngaphambi kokuqala inqubo yokuthola amazinga kashukela wegazi, kufanele ufake umucu wokuhlola kwi-Accu-Chek Performa Nano glucometer. Idivayisi ibhekwa njengelungele ukusetshenziswa lapho kuvela isithonjana sokudonsa okuvuthayo esibukweni.
Uma ngaphambili idivaysi isivele isetshenzisiwe, khona-ke kuyadingeka ukususa ipuleti lakudala bese ufaka okusha.
Imiyalo yokusebenzisa i-Accu-Chek Performa Nano glucometer ifaka lezi zinqubo ezilandelayo:
Ngaphambi kokuqala inqubo, udinga ukugeza izandla zakho kahle ufake amagilavu ​​enjoloba,
ukwenza ngcono ukuhanjiswa kwegazi emunweni ophakathi, kunconyelwa ukukuthinta kahle, okuzokwenza inqubo,
umunwe kufanele uphathwe nge-antiseptic kanye nokubhoboza nge-piercer ekhethekile,
ukunciphisa izinhlungu, kunconyelwa ukwenza ukubhoboza okuvela emunweni,
ngemuva kokubhoboza, udinga ukufaka umunwe wakho kancane, kepha ungakucindezeli - lokhu kuzosheshisa ukukhishwa kwegazi,
ekwehleni kwegazi okubonakala kufanele kulethe ukuphela komucu wokuhlolwa, opendwe ophuzi.
Imvamisa, umucu wokuhlola udonsa inani elifanele loketshezi lokuhlola, kepha uma lintuleka, kungadingeka igazi elengeziwe.
Ngemuva kokuthi uketshezi lugxishwe emgqeni wokuhlola, inqubo yokuhlola igazi kwimitha izoqala. Esikrinini kukhonjiswa ngesimo se-horaglass, futhi kungenzeka uthole umphumela ngemuva kwemizuzwana embalwa.
Yonke imiphumela yezinqubo igcinwa kwimemori yedivayisi ngokulondolozwa kosuku nesikhathi.
Ukuhlola ukuqina koshukela emzimbeni wesiguli, kungenzeka ukudonsa isampula ye-ketshezi ukuze kwenziwe ucwaningo kusuka kwezinye izindawo, okungukuthi kusuka esifundeni sesundu noma ehlombe. Esimweni esinjalo, imiphumela etholakele ingahle ingaqondile ngaso sonke isikhathi, futhi kungcono ukuthatha igazi kulezi zingosi ezihlukile ekuseni ngesisu esingenalutho.
I-Accu-Chek Performa Nano glucometer iyadingeka kubantu abanesifo sikashukela. Kuyinto elula futhi kulula ukuyisebenzisa, futhi ungathola umphumela ngemizuzwana embalwa. Usayizi omncane wemitha ukuvumela ukuthi uwuthwale ephaketheni lakho noma esikhwameni esincane.
“Kwatholakala ukuthi unesifo sikashukela kudala, kodwa ulwazi ngama-glucometer seluvele lunothile. Ekhaya, ngisebenzisa i-Accu-Chek Performa Nano, okulula ukuyisebenzisa futhi ihlala ikhombisa umphumela oqondile. I-glucometer ilungele ngoba iyakwazi ukukhumbula izifundo eziningi kakhulu. Ngiyayithanda ipeni lokubhoboza eza nedivaysi. Ngosizo lwayo, kungenzeka ukuthi kulawulwe ukujula kwesikhombo futhi senze ucwaningo ngaphandle kobuhlungu. Le divayisi incane kakhulu ukuthi ungayiphatha ukuze usebenze futhi uyohlola igazi njengoba kudingeka. ”
U-Irina, oneminyaka engama-45, eMoscow
“Umama unesifo sikashukela, ngakho-ke kufanele ngiqaphele njalo lokho okuqukethwe ushukela emzimbeni. Bekubalulekile ukuthenga ithuluzi elingasetshenziswa kalula ekhaya. Simise ukhetho kumitha ye-Accu-Chek Performa Nano, futhi sisayisebenzisa namanje. Ngokubona kwami, inzuzo yedivayisi ukuhlanganiswa kwayo nokukhanya kwesikrini, okubaluleke kakhulu kubantu abanombono ophansi. Umama ujabule ngale divayisi futhi uthi ngenxa ye-Accu-Chek Performa Nano, manje kungenzeka ukulawula kalula ushukela emzimbeni. Ngaphambi kokuhlolwa, udinga ukufaka umucu emamitha, ubhoboze umunwe wakho bese ufaka ithonsi legazi. Ngemuva kwemizuzwana embalwa, kuvela imiphumela esikrinini lapho ungahlulela isimo somuntu. "
U-Alena, oneminyaka engama-23, uKrasnodar
Kukhona nokubuyekezwa okungalungile, imvamisa kukhombisa izinkinga ngokuthengwa kwemichilo yokuhlola ushukela wegazi. Ezinye iziguli azithandi ukuthi imiyalo enamathiselwe ibhalwe ngolimi olungenakuqondwa nokuphrinta okuncane kakhulu.
I-Accu-Chek Performa Nano glucometer ingathengwa kuwebhusayithi yomenzi, kumakhemisi nasezitolo. Idivayisi inedizayini ekhangayo, ngakho-ke uma kunesidingo, ungayinika ngisho nabangane noma abantu obajwayele.